Nweta akwukwo akwukwo PMP na 2018 - Nyocha akwukwo, Atụmatụ na PMP Exam Update
Ụzọ kachasị dị irè iji nweta akwụkwọ ikike PMP na 2018 - Nyocha Ihe Ntuzi, Atụmatụ na PMP® Nyocha
Nweta akwụkwọ ikikere PMP na 2018 - Nchịkwa Management Project
Na-atụ anya ịkwalite ọrụ gị dịka Onye Ọrụ Nlekọta Ọrụ na-atụ anya na ị ga-enweta nhazi ihe nhazi n'ọhịa na nchọpụta ọkụ nke etiti na ịmụta mpaghara iji bulie nkwupụta ahụ achọrọ. Na ohere na ịnweta ikikere nchịkwa Project Management na 2018 dị n'elu ọkwa gị maka ụbọchị, ebe a bụ nitty gritty na-ewere gander na akụkụ nke ihe ndị ga-agbanwe banyere ule n'afọ ọzọ.
Anyị kwesịrị ịmalite site na mkpụrụ na ebuchi nke dị ugbu a banyere onye ọ bụla kwesịrị ịma
A nkenke banyere PMP - nkwenye mbụ ya na arịrịọ ya dị na azụmahịa mmepe, ebe ndị ọkachamara kwadebere n'ọtụtụ buru ibu ma na-emekarị ihe gbasara akụkụ nile nke ọrụ otu òtù. Site n'oge ahụ, ihe a chọrọ maka PMPs mepụtara na taa, ihe niile achụmnta ego, gụnyere mpaghara IT, na-adabere na ndị ọkachamara a iji nye ọrụ iji mezuo mmezu ya. Ọ bụ ụlọ ọrụ Project Management Institute kwadoro akwụkwọ PMP.
Akwụkwọ - PMI weghaara onye PMBOK na-eduzi ma ọ bụ Nchịkọta Ihe Ọmụma Project Management iji mee ka ndị mmadụ nwee ike imebi ókèala obodo ise - Ịmalite, Atụmatụ, Ime, Nlekota na Ịchịkwa na Imechi. N'ime nhazi ọkwa a n'ozuzu ha na-adaba ebe a na-acho akwukwo nke otu onye na-enwete na-achoputa ogo na oru nke oge, ugwo, nghota oru, atumatu, mma, ihe ndi ozo, ozi, nsogbu, inweta, na ndi enyi.
Pịa ebe a ka ibudata Nduzi Ọmụmụ PMP
Na nyocha - Ihe nyocha nke a na-agbado na ụbọchị ahọpụtara na PMP kwadoro ya, nyocha nke Prometric na-elekwasị anya. Olileanya chọrọ igosi maka ule ntanetị nke na-anwale nyocha ha nke 10 mmụta mpaghara. A nwalere ule a karịa ihe gbasara 200 nke na-anwale ihe atụ, ọ bara uru ma nwee ikike nke onye na-ese okwu iji lekọta ọnọdụ dị ka ọnọdụ.
I nwekwara ike ịlele: PMP Certification Training Institute na Gurgaon
IZI AHỤ AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ NDỤ DỊ N'IME 2018
PMI nke bu n'obi ime ka asambodo mara ya na omume ya na-abia, PMPBOK na ihe omuma atu na -egosiputa omume ndi ozo. E nwere mgbagwoju anya banyere ọganihu, maka ule a ga-etinye na 26th March, 2018 na mgbe. Ọ bụrụ na ị na-enyocha ihe gbasara nzukọ ochie ahụ, ọ bụ ihe dị mma iji gosipụta ule PMP tupu ụbọchị ahụ. Mee nke ahụ, ọ bụrụ na ịchọta ụbọchị ruru, ebe a bụ otu ugboro na PMP @ Exam Updates.
PMP Eligibility - Enweghi mgbanwe na ntinye akwukwo PMP maka ndi na-acho maka nzere ntozu. Ọ dabeere na ntụziaka na itinye aka n'ọhịa. Na ohere na ị nwere akara nke Bachelor (afọ anọ ma ọ bụ hà nhata), n'oge ahụ, ahụmahụ a chọrọ bụ 4500 awa ọrụ nke ịkwọ ụgbọala na ịhazi ọrụ. Na ohere nke na ị bụghị onye gụsịrị akwụkwọ, enwela nkụda mmụọ, akwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ̄ bụ akara nke nhọrọ ga-achọ ka i nwee 7500 awa nke ịkwọ ụgbọala na ịhazi ọrụ. Ha abụọ achọrọ ntụziaka nchịkwa nke oru ihe na-erughị awa 35, nke PMI ghọtara.
Ngwa - Usoro a ga-anọghị na 2018. Ikwesiri ijuputa etiti ngwa na saịtị PMI. Nkwenye nke ntụziaka, na nke ọzọ zutere, na-eme na netwọk site na mkpakọrịta.
PMBOK - PMI kwụsịrị ịhapụ 6th nke PMBOK. Mgbanwe dị mkpa nke akwụkwọ ahụ na ule ahụ bụ ibé ebe a:
- Mgbakwunye nke akụkụ na-elebara anya otu onye isi oru ngo na-arụ. Ikike, ihe omuma, na ahụmịhe ga-eme ka ị ghọta ajụjụ ndị na-etinye uche na mpaghara a.
- Gbanwee aha nke mpaghara mpaghara mmụta abụọ
A ga-atụle oge nlekọta oge na Nhazi oge
A ga-akpọzi Management Management nke mmadụ ugbu a dị ka Resource Management
E tinyewo ebe ọhụrụ anọ na mpaghara ozi ọ bụla, karịsịa:
Echiche ndị dị mkpa
Ụkpụrụ na omume nbili
Nkọwa nke Agile na Ebe Gburugburu
Ebumnuche maka ule - Ihe omumu na ihe omuma na-aga n'ihu dika o bu, n'agbanyeghi mmelite ohuru na PMBOK. Ị nwere ike ime PMP na-eme onwe gị, na-ejikwa saịtị PMI na nyocha enyocha iji mechaa 35 kọntaktị awa. Nhọrọ ọzọ bụ ịbanye na nkwadebe mmemme nke ga - enyere gị aka na Ngalaba Development Units ma ọ bụ PDUs. Ndị nkụzi nwere ahụmahụ ga-anọ ebe ahụ iji nyere gị aka ịghọta PMBOK, echiche nke ogige dị n'etiti na nghọta zuru oke nke mpaghara ọmụma. Ihe icheta mgbe ị na-eme atụmatụ maka ule -
Chọ maka enyemaka ma ọ bụrụ na ị nyochaa n'otu n'otu ma na-eche nsogbu ihu na-etinye n'ọrụ. PMPs n'ime mkpakọrịta gị ma ọ bụ nchịkọta ihe ntanetị aka bụ ụzọ dị egwu ịchọta ngwọta maka ajụjụ.
Ọ bụrụ na ị banyela na nguzobe, enwela ike ịjụ ajụjụ, ọbụna ndị maara ihe. Amụma nke PMP na-efu gị oge, ego na ịgbalịsi ike maka ndokwa - ọ bụla ejighị n'aka ga-edozi.
Debe oge site na oge gị na-atụ egwu ịtụgharị uche na PMBOK
Ntụziaka nlekọta na-eweta nsonaazụ nkwa, ya mere nyochaa ọchị, ọnụ ọgụgụ kasịnụ dịka i nwere ike
N'ikpeazụ, jide n'aka ma nwee obi ụtọ mgbe ị na-enye nyocha ahụ. Ịghọta ihe ga-eme ka ọ dị mfe
Kwenye na psyche na ahụ gị na-eme ka ume ọhụrụ tupu nyochaa ka ịmee nakwa dị ka ọ ga-atụ anya.
Nyocha PMP - A na-enye oge nkeji iri na ise iji nyochaa akwụkwọ akụkọ ahụ, emesịa ị ga-enweta awa anọ iji mechaa nyocha 200. Ọtụtụ ndị nwere olileanya nwere ike nyochaa akwụkwọ ahụ n'ime minit ise ma jikwa oge fọdụrụnụ nke 10 mee ihe ederede na mpempe akwụkwọ nyere nyere aka gụọ. Mee nke ahụ, ị ​​ga-aga n'ihu ọzụzụ a ga-apụ. Buru na dika o nwere ike, na-agba ọsọ megide ederede ma ọ bụ 'uche tụfuo' dịka a na-akpọ ya ka a na-ahapụ ya n'ime oge anọ ọzọ. Ebe ọ bụ na PMP adịghị enye mkpesa ọjọọ maka azịza ezighi ezi, ịchọrọ ka ị ghara inwe nchekasị ma ọ bụrụ na ịchọta ihe ngwọta.
Nsonazụ ahụ - Ndị na-enyocha nyocha nke akwụkwọ ahụ ga-enweta ihe ha pụta n'ime ụbọchị anọ mgbe a na-akpọpụta ihe nrite na ntanetị na nkewa. Ị ga - enweta otu n'ime ọkwa atọ ahụ:
Onye nwere ọgụgụ isi n'ụzọ ziri ezi
N'okpuru Onye Ọmụma
Imeri ndụ kwa ụbọchị mgbe Akwụkwọ ikike PMP - Ị nwere ike ịmeghe ọnụ ụzọ niile siri ike mgbe ọ bụla nkwuputala ahụ nwetara yana ọrụ ọganihu na nhacha ụgwọ kacha mma. Dị ka onye isi na-ebugharị ọrụ, ị gaghị eme ka ọnụ ọgụgụ gị na nkwalite gị dị elu, ị ga-adị njikere karị ilekọta oge na akụ.
Ntinye akwukwọ PMP - Ozugbo ị nwetarala Akwụkwọ ikike PMP, na oge etiti oge ị ga-enweta 60 PDUs, maka iweghachi nke asambodo ahụ.
N'ikpeazụ, n'agbanyeghị ma ị kpebiri ule ugbu a ma ọ bụ mgbe 26th March, 2018, enwere otu ihe ị kwesiri ikpachara anya na ngọngọ Project Management bụ ihe ọ bụla ma sie ike ịrụzu, ọ bụrụhaala na ị na-etinye ego ịme ihe na ịme ihe .
ITIL Vs PMP Asambodo? Kedu nke ziri ezi maka gị?
PMP vs PRINCE2 vs CAPM: Kedu nke dị mma maka m?